Top 8 Món ăn ngon nhất từ thịt nai mà bạn nên biết | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 8 Món ăn ngon nhất từ thịt nai mà bạn nên biết | Excitinghochiminhcity
Venison kazhinji ine tendon shoma, ine mafuta mashoma, uye ine nyoro. Mazhinji emaresitorendi akasarudzika muCentral Highlands ane nyama yemhuka pane menyu. Kubva pakudya kwemazuva ose kusvika kumapati makuru, kuvapo kwemhuka yemhuka kunogamuchirwa zvikuru nevadyi. Ngatidzidzei neTopList dzimwe ndiro dzakagadzirwa nenyama yemhuka kuti mhuri yese inakirwe.
Mhuka 700 gr
3 chili mhiripiri
Onion yepepuru 2 zvidimbu
Muto wehove 1 tablespoon
Satay 1 teaspoon
Kubika mafuta 2 tablespoons
Oyster mafuta 1 tbsp
Cashew ruvara mafuta 1 tbsp
Kurungwa kwakajairika 1 diki (kurunga / shuga)
Pera garlic nehanyanisi, wobva wazvicheka. Geza lemongrass nemvura, kana wapedza, shandisa kabanga kadiki kuti ucheke.
Chilli geza, omesa.
Gadzirira uye marinate nyama yemhuka
Tenga nyama yemhuka, geza, woomesa uye woomesa ganda pamoto kusvikira ndarama uye kuvhimwa zvakare. Wocheka nyama yemhuka kuita zvidimbu zvitete.
Wedzera kune chikamu chenyama yemhuka 1 tsp yakagayiwa gariki, 1 tbsp yakachekwa shallot, 1 tbsp yaka minced lemongrass, 2 maspuni yekurungwa, 1 tbsp yeshuga, 1 tbsp yehove muto, 1 teaspoon oyster muto, 1 tbsp yemafuta ecashew, 1 teaspoon satay mundiro. sanganisa zvakanaka kwemaminitsi mashanu.
Isa pani pachitofu, isa zvipunu zviviri zvemafuta ekubikisa, yasara minced lemongrass, garlic, nehanyanisi dzvuku mupani, fry kusvika zvanhuwirira kwemaminitsi maviri.
Isa nyama yemhuka yakakanyiwa mupani, fambisa-fry the ingredients pakupisa kukuru, simbisa kusvika nyama yaibva kwemaminetsi angangoita gumi, woisa 3 chilipi mhiripiri mupani, fambisa-fry kwemamwe maminetsi matatu, wozodzima moto.
Saka tapedza kuvhenganisa-yakakangwa nyama yemhuka ine lemongrass uye chili. Mhuka inotapira uye ine kumwe kuoma, yakaenzana inopinda muruvidzo yelemongrass inonhuhwirira, inonhuhwirira uye inonhuhwirira, ichigadzira pfungwa yekukurudzira kuravira kuti vanhu vanakirwe.
Mhuka yakakangwa ine lemongrass uye chili
1kg yemhuka itsva
Lemongrass: 2 zvirimwa
Zvishanu zvinonaka 2 hanyanisi
Minced garlic 500g fresh vermicelli, banh ask, rice bepa rekukunguruka
Inoperekedza miriwo: matomatisi, green bananas, lettuce,…
Kana watenga nyama yemhuka, geza. Zvadaro, isa nhindi yose yenyama mufiriji kuti iite kuti iome zvishoma.
Kana nyama yaoma chando, ibudise woshandisa banga kuicheka kuita zvidimbu zvitete zvikuru.
Zvadaro, isa nyama yemhuka mundiro hombe yakakanyiwa nemuto wehove, 1 minced lemongrass, zvinonhuwira zvishanu uye gariki. Shandisa zvimiti kuti usanganise zvakanaka kuitira kuti nyama inyanye zvinonhuwira uye wozorega kuti igare kwemaminitsi anenge 15-20.
Gadzirira zvimwe zvigadzirwa
Miriwo yakasvibira inoperekedzwa yakaita semabhanana egirinhi, lettuce… inogezwa, yozoiswa mumvura ine munyu yakanyungudutswa kuti ibvise chepfu uye tsvina kwemaminitsi gumi. Zvadaro, ibudise kunze kuti ibudise. Cheka mabhanana egirinhi kuita zvimedu zvinoruma.
Anyanisi akasvuura, akagezwa, akachekwa areca.
Madomasi akagezwa, wedzera areca zone.
Cheka chinanazi kuita zvidimbu zvinoruma.
Gadzira muto wenyama yemhuka
Kuti uwane poto inonaka yehari inopisa, unoda kugadzirira 1 litre yemvura yakasvibiswa, kuwedzera vhiniga, kuwedzera lemongrass yakapwanyika, anyanisi, mvura yekononi, pineapple kune muto kuti uwedzere kunhuhwirira.
Zviuye nazvo kumota kusvika zvasangana. Munguva yekubika, yeuka kudzoreredza mwaka wezviyo zvekuravira.
Sanganisa muto unonwiwa wenondo unonaka uye wakavava
Kuti uwane mbiya yekunyura muto unoenderana nekuravira zviyero, unofanirwa kushandisa chiyero chakakodzera: 1.5 zvikamu zveshuga + 2 zvikamu zvemvura + 1 chikamu chehove muto + minced chili garlic muto wemononi, sanganisa zvakanaka.
Mukuwedzera, zvichienderana nezvinodiwa nemunhu wega wega, kune nzira dzakasiyana dzekugadzirira muto wekunyura kuti uenderane nekuravira. Iwe unogona zvakare kushandisa soy muto semuto wekunyura.
READ 2 Cách Làm Chuối Sấy Không Cần Lò Nướng Tẹt Ga Ăn Tết | Excitinghochiminhcity
Mushure mekupedza gadziriro dzese, isa poto inopisa pakati petafura, padivi payo pane tireyi hombe izere nemiriwo: lettuce, yakachekwa mabhanana egirinhi, matomatisi, hanyanisi dzakachekwa, noodles … enjoy.
Unogona kunyudza nyama yacho mupoto inopisa kana kukungurutsa nyama yacho nemuriwo mbishi wobva wainyika mumuto. Usakanganwa kushumira nevermicelli nemimwe miriwo kuti uwedzere kunhuhwirira mundiro.
Venison yakanyikwa muvhiniga
Mhuka 500 gr
Yakaomeswa black fungus 50 gr (huni nzeve)
Onion 2 zvidimbu
Coriander / Coriander inombundira matavi mana
Onion yepepuru 1 chidimbu
Lemongrass 3 zvinomera
Ginger 1 bazi
Curry powder 2 maspuni
Turmeric hupfu 1 teaspoon
Kokonati mvura 100 ml
Kokonati mukaka 50 ml
1 waini chena shoma
Kubika mafuta 5 tablespoons
Kurungwa kwakajairika 1 diki (kurunga / shuga / munyu / mhiripiri)
Kugadzirira kwehowa nemiriwo
Isa 25g yeakaomeswa fungus yakasviba mundiro yemvura inotonhorera, soak kweawa imwe kuti unyorove howa, wozogeza nemvura. Wocheka makumbo ehowa wocheka katsi howa kuita shinda dzinodyiwa.
Hanyanisi yakapepetwa, yakachekwa areca. Hanyanisi yakatsvuka yakasvibiswa, yakachekwa zvishoma.
Lemongrass yakagezwa, yakachekwa. Coriander, cilantro, cheka kuita zvidimbu zviduku.
Kuti ubvise kunhuhwirira, mushure mekutenga nyama yemhuka, unoigeza newaini chena uye kushandisa ginger kukwesha nyama. Zvadaro sukurudza kakawanda nemvura yakachena, rega kuoma.
Zvadaro, cheka nyama kuita zvimedu zvitete kuti toravira, wozoisa mundiro.
Cheka nyama nezvipunu zviviri zveshuga, chipunu chemunyu, zvipunu zviviri zvemukunga, 1/2 teaspoon yemhiripiri, teaspoon yecurry powder, turmeric powder, 2 tablespoons yemafuta ekubikisa. Sanganisa zvakanaka uye marinate for anenge maminitsi gumi nemashanu kuti nyama itore zvinonhuwira.
Sauteed nyama yemhuka
Isa pani pachitofu ine zvipunu zvitatu zvemafuta ekubikisa, wobva waisa zvese minced shallots nelemongrass, soya nepakati kupisa.
Apo shallots inotanga kushanduka goridhe, wedzera nezve 1 teaspoon ye curry powder kune pani uye fambisa zvakanaka.
Zvadaro, unoisa nyama yose yakakangwa mupani, fambisa-fry kwemaminitsi gumi kusvikira nyama yatanga kuvhima zvakare. Dururira munenge 100ml yemukaka wekokonati, kupisa kusvikira mvura yavira, uye kuderedza kupisa kusvika pasi, ramba uchibika kwemaminitsi anenge 10-15 kusvikira nyama yanyorova.
Mushure mekubika kwemaminitsi gumi nemashanu, wedzerai howa uye 50ml yemukaka wekokonati kune pani, simbisai zvakanaka, wedzera kupisa kusvika pakati, kubika kwemaminitsi makumi maviri.
Pakupedzisira, wedzerai hanyanisi, sanganai zvakanaka, gadzirai anenge 5-7 maminitsi kusvikira hanyanisi yakabikwa, yakapfava, inosasa coriander, cilantro uye inakidzwe nendiro.
Sauteed venison rolls inopisa, inonhuhwirira mhino. Iyo ndiro yenyama ine yero ruvara kubva kune turmeric poda, iyo curry inobata maziso zvakanyanya. Mhuka yakapfava, ganda racho rakaomarara uye rakatsetseka, rakarungwa nechiyero chakakodzera chezvinonhuwira. Muto wacho wakakora, uchiwedzera kakunhuwirira kuita kuti ndiro yacho iwedzere kuyevedza.
Iwe unogona kushumira nechingwa kana mupunga unopisa, zvichava zvinonaka kwazvo. Mukuwedzera, kuti uite ndiro inopisa uye inonaka, unofanira kuiisa pane ndiro yesimbi uye woiisa pachitofu pamusoro pekupisa zvishoma uye wozoishandisa!
READ Tàu hỏa leo núi Mường Hoa Sapa | Excitinghochiminhcity
Mhuka yakakangwa yakakangwa
Mhuka inosara yakakwana, yakashambidzwa newaini chena shoma uye ginger kuti ibvise kunhuhwirira, yakashambidzwa nemvura uye inobva yapera.
Ginger, lemongrass, chili, minced garlic
Siya 4-5 lemongrass zvinomera, cheka kuita zvidimbu zvipfupi uye 1 chidimbu cheginger, cheka kuita zvidimbu zvakakura uye zvitete, wozoisa mumoto une nyama yemhuka.
Marinated nyama yemhuka
Ginger yemasaji, lemongrass, chili, yakagayiwa nenyama yemhuka ine 1 chipunu chidiki chesobho + 1 spoon yeoyster muto + 1 spoon yesoya muto + 1 spoon mafuta esame kana mafuta ekubikisa kuti vese vapise, marinate kwemaminitsi makumi matatu.
Gadzirira hari yemvura ine tswanda inopfungaira, isa nyama yemhuka yakakanyiwa pamubhedha, isa nemongrass uye ginger rakachekwa rakatenderedza nyama yemhuka. Vhara poto uye upfudze nyama yemhuka kwemaawa anenge 1-2 zvichienderana nekukora kwenyama. Kana uchishandisa skewered chopsticks kuedza nyama uye kuona kuti hapana muto mutsvuku unobuda, zvinoreva kuti nyama yakabikwa. Panguva ino, isa nyama pabhodhi rekucheka, cheka zvishoma uye uidye ichipisa.
Mhuka inobikwa kuti ive yakapfava, inotapira, yakanyikwa neginger sosi kana muto wemunyu kana munyu, mhiripiri, uye ndimu sezvaunoda.
Lemongrass, ginger, garlic.
Kurunga: munyu, shuga, chipfu, soy muto, cashew ruvara, zvishanu zvinonaka…
Mhuka yakanyoroveswa mumvura inodziya uye yakanyungudutswa nemunyu, yozosukurudzwa zvishoma nemvura inotonhora, yokwizwa neginger yakakanyiwa panyama kuti ibvise munhuwi wemhuka. Shamba zvakare nemvura yakachena, dhonza, ucheke muzvidimbu zvakakura 1 cm yakakura maererano nehurefu hwenyama.
Minced peeled lemongrass uye gariki.
Marinated nyama yemhuka ine lemongrass, minced garlic, soy sauce, shuga, munyu, cashew ruvara, paprika, zvinonhuwira zvishanu. Bvisa zvinonhuwira zvose zvakafanana panyama uye shandisa kuvhara kwezvokudya zvakavharwa kuti uise mukamuri inotonhorera yefiriji, marinate nyama kwemaawa gumi kusvika ku12 kuti nyama iwedzere zvinonhuwira.
Isa poto pachitofu, isa nyama muzvidimbu. Bika kwemaminetsi angangoita makumi matatu pamoto wakaderera (usawedzere mvura sezvo nyama yemhuka inodiridza yega). Kana nyama yemhuka yashanduka kubva mutsvuku kuenda kushava uye mwero wemvura wadzikira, dzima chitofu.
Shandisa dhaka kupuruzira nhindi imwe neimwe yenyama kusvikira wava kuibvarura nemaoko.
Isa nyama mupani hombe, batidza chitofu chakaderera uye kurunga zvakanaka kusvika nyama yaoma kana kuisa nyama muchoto, woenderera mberi nekubika nyama yacho pa 110 degrees celsius kwenguva yemaminetsi makumi matatu, shandura nyama. maminitsi ose 15. Rega nyama iome zvakaenzana.
Nyama inogona kushandiswa mushure mekuomeswa uye kubvumirwa kutonhora, asi kana ikasashandiswa, inogona kuchengetedzwa nekuisa nyama yakaomeswa mumudziyo usina mhepo. Pakudya zvakatswanyiwa, svina ndimu shoma wonyika nemuto wechili.
Lemongrass, garlic, chili, anyezi akaomeswa
Miriwo inoshandiswa: basil, perilla, lettuce, gaka, nyeredzi michero …
Geza nyama yemhuka nejinja yakapwanyika kuti ibvise kunhuwirira, wozocheka kuita zvidimbu zvinoruma (ona kuti nyama inenge yakapfava uye isingatsenge kana yachekwa), wozoibvisa.
Lemongrass, garlic, chili, akaomeswa hanyanisi, minced
Marinate nyama: Isa lemongrass, garlic, chili, minced onion yakaomeswa nekapuni imwe oyster sauce, 1 tablespoon hove sauce, 1 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon soup poda mundiro yemhuka, sanganisa zvakanaka. Zvadaro unovhara ndiro nefirimu yezvokudya, uisiye mufiriji kwemaminitsi makumi matatu kuti zvinonhuwira zvose zvipinde munyama.
Usati wagocha, sanganisa nyama nemafuta ekubikisa.
Nyama isina musono pane grill, unogona kuwedzera eggplant, okra, yakachekwa bhero mhiripiri kuti ubike pamwechete kunhuhwirira, zvakare inoyevedza.
Nyama yemhuka yakagochwa
Anyanisi: 1-1.5 zvidimbu
Celery: 1-2 zvirimwa
Tomato: 1 muchero
Zvinonhuwira: Shuga, munyu, mainodles, muto wehove, mafuta ekubikisa, satay, chili (kana uchidya zvakarungwa), garlic yakagurwa, hanyanisi dzvuku yakachekwa.
Gadzirira uye marinate nyama
Pakutenga nyama yemhuka, ikwidze nemunyu, woigeza nemvura yakachena wosiya iome. Zvadaro cheka nyama kuita zvidimbu zvitete.
Chengetedza nyama yemhuka ne 1/2 chikamu chegariki, chilli yakakanyiwa, maspuni maviri MSG, 1 teaspoon yekurunga, 1 teaspoon yeshuga, 1 tablespoon satay, 1 tablespoon mafuta ecashew. Sanganisa zvakanaka kupinza kurunga uye marinate kwemaminitsi mashanu.
Nokuda kwegariki, yakachekwa yakaomeswa hanyanisi, kurudzira-fry, wedzera madomasi, marinated venison uye fambisa-fry. Chenjerera paunenge uchikurudzira, chengetedza kupisa kwakanyanya kuitira kuti nyama yemhuka irege kuwana mushy.
Wedzera hanyanisi uye celery uye songa kusvikira yaibva. Rongedza kurunga kuravidza.
Isa nyama yakabikwa mundiro, isa mhiripiri kana uchida, uye unakirwe.
Nyama yemhuka yakakangwa nehanyanisi
Mhuka 400 gr
100 gr. guse mashizha
Onion 1 chidimbu
Coriander matavi matatu
Garriki yakagurwa 3 clove
Minced chili 2 zvidimbu
1 puniki yemunyu granulated
Yakajairika seasoning 1 diki (monosodium glutamate / seasoning / shuga)
Preliminary processing yemiriwo
Pera hanyanisi, woisuka, woicheka kuita wedges.
Mashizha ebetel necoriander zvakagezwa nemvura nguva shomanana, vachishandisa banga kucheka kuita zvidimbu zvidiki.
Isa pani pachitofu, woisa 2 maspuni emafuta ekubikisa uye soya yasara 1/2 chikamu chegariki uye minced chili.
Kana garlic uye chili inonhuhwirira, wedzera nyama yakagadzirwa kare, simbisa-fry kwemaminitsi mashanu pakupisa kukuru.
Zvadaro, isa hanyanisi mupani, kurunga kusvikira hanyanisi yatanga kuibva, woisa bay leaves, kurunga kwemaminitsi matatu kusvika mashizha aibva, wodzima moto, woisa mundiro woshongedza nekorianderi yakachekwa.
Saka tangopedza inonaka uye inoyevedza yenyama yemhuka yakakangwa ine mashizha anoyevedza. Inotapira, ine zvishoma inotsenga yemhuka ine hwema hwayo yakasanganiswa nemashizha eguise inogadzira mutsva uye unofadza zvakanyanya. Edza kugadzira chikafu ichi kumba!
Nyama yemhuka yakakangwa ine guise mashizha
← Các Mùa Trong Năm Xuân Hạ Thu Đông từ tháng mấy đến tháng mấy | Excitinghochiminhcity
‘Lác mắt’ với vườn bí ngô khổng lồ Đà Lạt siêu độc được dân mạng săn lùng | Excitinghochiminhcity →